इस्टोनिया र लाटविया - यस लेखमा छलफल गरिनेछ जो खाडी, दुई साना देशहरू बीच स्थित छ। यो बाल्टिक सागर को पूर्वी भाग मा स्थित छ।
को रीगा तट मा छोटकरीमा
रीगा को स्पा खाडी - यो कुरा धेरै मुख्यतया सबै Jurmala लागि परिचित छन्। रीगा - तथापि, सबैलाई यो तट मात्रै त्यहाँ पनि लाटविया राजधानी छ Daugava नदी, मुख को बायाँ छेउमा छ थाह छ।
त्यहाँ तट को सही पक्षमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा, को रीगा क्षेत्र समावेश र सुनको बालुवा, जहाँ तपाईं आफ्नो गर्मी छुट्टी खर्च गर्न सक्छन् नै सुन्दर समुद्री तट झेलिरहेका छन्। धेरै शान्त पनि यहाँ मौसम को बीचमा पनि धेरै vacationers मूल्यांकन गर्छन् जो - यो साइट को केवल एक सुविधा छ।
खाडी रीगा: स्थान, वर्णन
अवकाश यात्री लागि एक लोकप्रिय गन्तव्यहरू को - रीगा समुद्र तटीय।
खाडी को उत्तर पक्षमा इस्टोनिया स्वामित्वको Moonsund द्वीप द्वीपसमूह अवस्थित छ। जलाशय को किनारमा अधिकांश बालुवा बनेको छन्। लगभग 174 किलोमिटर दूरी मा भूमिमा बग्छ जो खाडी क्षेत्र, 18.1 हजार वर्ग बराबर। एम मी। चौडाइ गरेर 137 किलोमिटर भन्दा बढी विस्तार। रीगा को खाडी को अधिकतम गहिराई अपेक्षाकृत सानो छ र 54 मिटर छ।
खाडी द्वीप दक्षिणी टिप बीच स्थित Irbe Strait द्वारा मुख्य भूमि, अलग छन् Saaremaa को द्वीप को र केप केप Kolka र Väinameri (Strait)। तिनीहरूमध्ये इस्टोनिया स्वामित्वको टापुहरूमा छन्। यो Kihnu Manilaid र Ruhnu Abruka। खाडी कोस्ट को सबै भन्दा lowlands हो, र यसको तल मुख्य रूप बलौटे छ।
Lielupe - रीगा नदी खाडी। पनि पार्नु, गिर पश्चिमी Dvina, Salaca, Gauja र Agay।
यी स्थानहरू को सबै भन्दा ठूलो पोर्ट - रीगा। अझै यो उल्लेख हुनुपर्छ खाडी को पश्चिमी किनारमा Liv भनिन्छ, र यो एक सुरक्षित क्षेत्र हो।
शानदार प्राकृतिक आकर्षण देखि खाडी गर्न आसपास क्षेत्रमा: पार्क Pisyuras, boulders को ridges Vella Calvi वनस्पति रिजर्व को चट्टानी Vidzeme समुद्र तटीय र अरूको खण्ड "रेण्ड plyavas"।
प्रवाह र तापमान को प्रकृति
को गर्मी मा पानी को तापमान 0-1 ° सी आइस बे गर्न कम गर्ने हिउँदमा ढाकिएको र अप्रिल आफ्नो डिसेम्बर मा लुकेको छ, 18 ° C पुग्छ। पानी लवणता 6% छ।
एक rotational प्रकार समयमा बारेमा 8 सेमी / सेकेन्ड को शिखर गतिमा।
रिसोर्ट्स र शहर
सुन्दर लातवियाई सहर र रिसोर्ट्स आराम गर्न धेरै आगंतुकों आकर्षित। Jurmala महिमाको शहर, उत्तरका मा - - दक्षिण-पश्चिम तट मा एक महान पार्नु, Saaremaa को टापुमा कुरेससारे छ।
रीगा को खाडी यसको बैंकहरू धेरै बस्तियों मा पोस्ट। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै विशेषताहरु र लाभ छ।
रीगा समुद्र तटीय मा, तर पनि युरोप Jurmala मा मात्र होइन सबै भन्दा सुन्दर रिसोर्ट्स एक लाटविया राजधानी देखि 14 किलोमिटर स्थित छ। यो रिसोर्ट क्षेत्र साथ विस्तार भाग (32 मी) संकीर्ण पट्टी मा विस्तार रीगा को खाडी।
Dzintari, Lielupe, Bulduri, Asari, Dubulti, Majori र Kemer: सबैभन्दा अंक निम्न जनसंख्याको प्रसिद्ध। यी बस्तियों प्रत्येक मूल र अद्वितीय छ। तल केही एक संक्षिप्त विवरण छ।
1 महिमित प्रसिद्ध Dzintari कन्सर्ट हल, जहाँ संगीत प्रतियोगिता "नयाँ लहर", KVN चाडहरूमा र विश्व संगीत को संगीत।
2. Lielupe टेनिस कोर्ट र एक शानदार नौका क्लब संग एक ठूलो खेल केन्द्र हो। लाटविया मा सबै भन्दा ठूलो पानी पार्क पनि छ।
3. Asari र Melluzi ज्यादातर एक आराम छुट्टी लागि डिजाइन।
4 Maiori उल्लेखनीय सक्रिय विचरण, यो धेरै रेस्टुरेन्ट, क्याफे र पसलहरूमा मा स्थित।
5 Kemeri र Jaunkemeri राम्रो स्वास्थ्य को लागि ज्यादातर सिफारिस गरिएको। यहाँ आफ्नो सेवा माटोको स्नान र सल्फर पानीका मुहानहरू निको संग उत्कृष्ट चिकित्सा र स्पा सेन्टर प्रस्ताव।
6 पार्क भव्य पानी आकर्षण तपाईं Vaivari मा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
रीगा को खाडी यो असाधारण प्रायद्वीप द्वारा धोए छ। यो क्षेत्र जहाँ अचम्मको हरियो पाइन वन बिस्तारै नरम सुनको तटों मा उत्तेजित गर्दछ ठाउँ छ। मानिसले बनाएको प्रायद्वीप को मुख्य आकर्षण - (पूर्वी छाल रोक्ने पर्खाल Mangalsalskaya बाँध) अलेक्जेन्डर द्वितीय को शासनकालमा 1861 मा बनाइएको थियो।
यहाँ तपाईं रूसी-स्वीडिश युद्ध को अवधि देखि संरक्षित गर्ने catacombs, आफैले देख्न सक्छौं। यो सबै लातवियाई राज्य सुरक्षित छ। यसलाई यहाँ ठूलो र आश्चर्यजनक सुंदर sunsets देखिन्छ। रीगा को खाडी को प्राकृतिक मा धनी छ।
को बाल्टिक सागर र खाडी को इतिहास बारेमा बिट
युरोप मा (भू-को मामला मा) जवान को गठन को एकदम रोचक इतिहास, को बाल्टिक सागर, जो जोडिएको छ र रीगा को खाडी।
Holocene यसको वर्तमान सीमाना को गठन को समय छ। धेरै पहिले कन्टिनेन्टल बरफ (को Pleistocene समयमा) एक सीमित ठाउँ (बाल्टिक बेसिन) मा उहाँलाई पानी राखिएको। समुद्र बरफ को पग्लिने क्रममा ताल बनेको छ। (। 10 हजार वर्ष पहिले) - Yoldia को जडान जो, (ioldiya द्वारा डब गरिएको अटलांटिक देखि यो मा समातिए शंख) त्यसपछि, यसको सामग्री रूपमा, फेरि एक समुद्र बन्न सेतो सागर उत्तर संग। फलस्वरूप, गत दुई हजार वर्ष भन्दा बढी केही tectonic प्रक्रियाहरु, त्यहाँ अब केन्द्रीय स्वीडेन के छ मा एक वृद्धि भएको थियो। यसरी सागर संग जडान बन्द र Yoldia नुनीन समुद्र अलवण Ancylus कुण्डमा गरियो।
कारण क्रमिक वार्मिंग मा स्थान isthmus गर्न डेनिस स्ट्रेट्स तल र तथाकथित Littorina सागर छ (को क्लैम देखि पनि - periwinkle litorea) अटलांटिक महासागर पुग्यो। 4000 वर्ष पहिले र को फलस्वरूप देखा छ को बाल्टिक सागर। यसको किनारा को रूपरेखा, पाठ्यक्रम, 1.5 हजार। साल परिवर्तन भयो।
अघिल्लो Litorina समुद्र को स्तर6मीटर गर्न मुख्य भूमि भन्दा उच्च थियो भएकोले समुद्र माथि विशाल क्षेत्र, जो बीच सानो गरिएका रीगा छन् खण्ड, निर्मित फैलाउन छ।
चाखलाग्दो कुरा, पोखरी Baikal सकिन वा undrained?
Bureya आरक्षित: फोटो र विवरण
5 फरवरी। परम्परा, संकेत, यो दिन को इतिहास मा बिदा र घटनाहरू
"विकर" बगैंचामा लागि विचार: आफ्नै हात प्लट सजाउनु